Psalmen 34 HTB - Nnwom 34 ASCB
Dawid dwom a ɔtoeɛ ɛberɛ a ɔboa pa danee ɔbɔdamfoɔ wɔ Abimelek anim no na ɔpanin no gyaee no ma ɔkɔeɛ no akyi.
1Mede aseda bɛma Awurade berɛ nyinaa;
nʼayɛyie wɔ mʼanom daa.
2Me kra bɛhoahoa ne ho wɔ Awurade mu;
ma amanehunufoɔ nte na wɔn nni ahurisie.
3Mo ne me nkamfo Awurade;
momma yɛmmɔ mu nkamfo ne din!
4Mefrɛɛ Awurade na ɔgyee me so;
na ɔyii me firii mʼakomatuo nyinaa mu.
5Wɔn a wɔhwɛ nʼanim no hyerɛn
na wɔn anim rengu ase da.
6Ohiani yi frɛeɛ, na Awurade tiee no;
na ɔgyee no firii nʼahohia nyinaa mu.
7Awurade ɔbɔfoɔ wɛn wɔn a wɔsuro no,
na ɔgye wɔn.
8Monka nhwɛ na monhunu sɛ Awurade yɛ.
Nhyira ne onipa a ɔhinta wɔ ne mu.
9Monsuro Awurade, mo a moyɛ nʼahotefoɔ,
na wɔn a wɔsuro noɔ no nhia hwee.
10Agyata yɛ mmrɛ na ɛkɔm de wɔn,
nanso wɔn a wɔhwehwɛ Awurade no, adepa biara remmɔ wɔn.
11Mommra, me mma, monyɛ aso mma me;
mɛkyerɛkyerɛ mo Awurade ho suro.
12Mo mu hwan na ɔpɛ nkwa
na ɔpɛ sɛ ɔhunu nna papa bebree?
13Ɛnneɛ ɛnsɛ sɛ ɔka kasa bɔne, na ɛsɛ sɛ ɔgyae atorɔtwa.
14Twe wo ho firi bɔne ho, na yɛ papa;
hwehwɛ asomdwoeɛ na ti no.
15Awurade ani wɔ ateneneefoɔ so
na ɔtie wɔn mpaeɛbɔ;
16Awurade ani sa wɔn a wɔyɛ bɔne,
sɛ ɔbɛyi wɔn nkaeɛ afiri asase yi so.
17Ateneneefoɔ team su, na Awurade tie wɔn;
ɔyi wɔn firi wɔn haw nyinaa mu.
18Awurade bɛn wɔn a wɔapa aba
na ɔgye wɔn a wɔadwerɛ wɔn wɔ honhom mu no nkwa.
19Onipa tenenee bɛhunu amaneɛ bebree
nanso Awurade gye no firi ne nyinaa mu;
20ɔbɔ ne nnompe nyinaa ho ban,
sɛdeɛ emu baako mpo mmu.
21Bɔne bɛkum ɔdebɔneyɛfoɔ;
ɔteneneeni atamfoɔ bɛnya afɔbuo.
22Awurade gye nʼasomfoɔ nkwa;
wɔn a wɔdwane toa noɔ no mu biara renkɔ afɔbuo mu.
ASCB : Nnwom 34